avylavitra · Septambra 2021 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Septambra, 2021
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Septambra, 2021
Azia Afovoany sy Kaokazy 23 Septambra 2021
19 no fitambaran'ny medaly azon'ny tarika avy ao Azerbaijana: 14 volamena, 1 volafotsy, ary 4 alimo.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 23 Septambra 2021
Ilay fanafoanana dia ampahany amin'ny famoretana amin'izao fotoana izao atao an'ireo ONG, media tsy miankina, ary mpikatroka izay nihamafy tamin'ity lohataona ity, taorian'ny herintaona nisian'ny hetsipanoherana an'ireo fifidianana feno hosoka.
Azia Atsinanana 22 Septambra 2021
Navoitran'ny fanadihadiana iray nataona vondrona mpiaro zon'olombelona fa manodidina ny 40.000 eo ireo vahiny mpiasa an-trano no tsy nanam-pitsaharana nandritra ilay valanaretina, ary 20.000 amin'ireo no tsy nahazo afa-tsy andro iray ho fitsaharana isambolana.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 10 Septambra 2021
Ho fiatrehana ireo firehetana any an'ala izay mandravarava ny avaratr'i MAkedônia, nambaran'ny governemanta ny fisian'ny hamehana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 09 Septambra 2021
Angatahan'ireo mpikatroka ny hanomezana fialofana ho an'ireo vehivavy miatrika herisetra an-tokantrano, ary hanafoanana ny andininy faha-153 ao anatin'ny didy famaizana ao Koety, izay manalefaka ny heloka natao hiarovana voninahitra.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 08 Septambra 2021
Voatery ny pôlisy slôveniàna nanaisotra tamin-kery ireo olona roapolo mahery manohitra ny fanaovana vaksiny no sady tsy nanao arotava sy naniratsira mpanao gazety.
Songadina Global Voices Aogositra 2021
Mediam-bahoaka 07 Septambra 2021
Ireo lohahevitra nisarika ny mpamaky antsika tamin'ny volana Aogositra: ny dobo filomanosana, ny fahafatesan'ny poeta karaibiàna iray be mpankafy, ireo vehivavy mhazakazaka toy ny rivotra, ny fampandihizana kibo.
Azia Atsinanana 05 Septambra 2021
Sambany izao hatramin'ny nampitambarana an'i Hong Kong indray tamin'i Shina no nisy manamboninahitra fahiny tao amin'ny pôlisy notendrena ho amin'ny toeran'ny sekretera jeneraly.